Bit By Bit - Kucherechedza maitiro - 2.4.1 Counting zvinhu
Simple ngaakudze inogona kunakidza kana iwe sangana mubvunzo zvakanaka mashoko akanaka.
Kunyange zvazvo zviri wakanyanga mu yakagozha vachiridza mutauro, mijenya munzanga kutsvakurudza chaizvo chete tichiverenga zvinhu. In nemakore mashoko makuru, vatsvakurudzi kuverenga kupfuura kare, asi kuti hazvingabvi zvareva kuti kutsvakurudza anofanira nezvezvandaifanira yekuverenga kuwedzera penhumbi. Asi, kana tiri kuenda kutsvakurudza zvakanaka guru data, tinofanira kubvunza kuti: zvinhu munokosha kuverenga? Izvi zvingaita sokuti zvachose kuzviitira nyaya, asi pane dzimwe mhando zvayo.
Kazhinji vadzidzi kukurudzira kutsvakurudza ngaakudze achiti: Ini ndiri kuverenga chinhu kuti hapana akambokwanisa kuverengwa pamberi. Somuenzaniso, mumwe mudzidzi angati, vanhu vakawanda vakadzidza vanotama uye vanhu vazhinji vakadzidza mapatya, asi hapana munhu akadzidza pamutemo mapatya. Motivation kusavapo Haawanzopa kutungamirira pakutsvakurudza zvakanaka. Chokwadi, pangava nezvikonzero zvakanaka kudzidza pamutemo mapatya, asi chokwadi kuti havana kudzidza pamberi hazvirevi kuti vanofanira kudzidzwa ikozvino. Hakuna munhu akamboenda nhamba shinda pamusoro kapeti muhofisi yangu kuverengwa, asi kuti haangoerekani kureva kuti izvi zvaizova zvakanaka tsvakurudzo chirongwa. Motivation kusavapo mutsa kwakafanana achiti: tarirai, pane buri pamusoro ipapo, uye ndiri kuenda kushanda nesimba chaizvo kuti vazadze naro. Asi, kwete gomba ose anofanira kuzadzwa.
Pane yaikurudzira kusavapo, ndinofunga kuti tichiverenga zvinoisa pakutsvakurudza zvakanaka ezvinhu zviviri, kana pakutsvakurudza unofadza kana anokosha (kana Zvakanakisa zvose). Somuenzaniso, kuyera mwero kwemabasa kunokosha nokuti chokukomborerwa upfumi runotibatsira sarudzo itsika. Kazhinji, vanhu vane pfungwa zvinokosha yakanaka. Saka, mune dzimwe muchikamu chino, ndava kupa mienzaniso mitatu apo ngaakudze unofadza. Muchiitiko chimwe nechimwe, vaongorori vakanga pasingaverengwi tichimhanya-mhanya, asi vakanga tichiverenga zvikurukuru chaizvo muzviruva kuti aratidzwe nzwisiso inokosha kupinda mamwemazwi pfungwa sei magariro evanhu basa. Mune mamwe mazwi, yakawanda chii chinoita izvi ngaakudze zviitwa zvikuru zvinonakidza haisi ari mashoko pacharo, chinobva pfungwa idzi mamwemazwi.
Below Ndichaenda kupa mienzaniso mitatu iri: 1) vanoshanda unhu tekisi nevatyairi muNew York (Section 2.4.1.1), 2) Ushamwari inotungamirwa nevadzidzi (Section 2.4.1.2) uye 3) evanhu nhau kusenza nomufambiro Chinese hurumende (Section 2.4.1.3). Mienzaniso iyi kugovana ndechokuti vose vanoratidza kuti kuverenga mashoko makuru anogona kushandiswa aedze yokungotaura zvakafanotaurwa. Mune zvimwe zviitiko, hombe mashoko matsime ukwanise kuita ngaakudze ichi hwakanyatsorwisa zvakananga (sokune reNew York Taxis). Mune zvimwe zviitiko, vatsvakurudzi vanofanira kubata incompleteness kuburikidza kubatanidzwa nomumwe date pamwe chete uye operationalizing yokungotaura constructs (sokune ushamwari inotungamirwa); uye mune zvimwe zviitiko vatsvakurudzi vanofanira kuunganidza pachavo observational Data yavo (sokune evanhu nhau kusenza). Sezvo Ndinovimba mienzaniso iyi inoratidza, nokuti vanotsvakurudza vanogona kubvunza mibvunzo inonakidza, hombe mashoko anobata vimbiso huru.